Denizli Ski Center mihazakazaka amin'ny firaketana miaraka amin'ny isan'ireo mpitsidika - RayHaber | raillynews
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka20 DenizliDenizli Ski Center mihazakazaka amin'ny firaketana miaraka amin'ny isan'ireo mpitsidika
13 / 01 / 2020 20 Denizli, Côte d'Ivoire Tiorka, ANKAPOBENY, TORKIA, TELPHER
denizli ski resort dia mirakitra ny isan'ny mpitsidika
Denizli Ski Center, izay iray amin'ireo toerana iresahana indrindra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina, mihazakazaka mankany anaty firaketana miaraka amin'ny isan'ny mpitsidika. Manakaiky ny 50.000 ireo nitsidika ny foibe tamin'ity vanim-potoana vaovao ity, ny ben'ny tanàna Osman Zolan sy ny vadiny Berrin Zolan vadiny dia mpiara-miasa amin'ny fahafinaretana amin'ny fidiram-bolan'ny olom-pirenena.
Denizli Ski Center, izay iray amin'ireo tetikasa manan-danja indrindra napetraky ny Kaominin'i Denizli Metropolitan, mihazakazaka mirakitra ny isan'ny mpitsidika. Vao haingana, iray amin'ireo toerana nisafidy ny ririnina fanatanjahan-tena ao Torkia sy 4 dia tokony ho 50 arivo mpitsidika nampiantrano amin'ny alalan'ny fisafidianana ny Denizli Ski niakatra ho any amin'ny vanim-potoana vaovao izao. Tiorkia mitohy ny miaramila olom-pirenena te-hihaona maro ao an-tanàna, izay matihanina sy ny mpankafy sy ny mpanao ski snowboarders avy amin'ny 7 ka hatramin'ny 70 trano handraisana ireo izay te-hanao amin'ny oram-panala. Ny ben'ny tanànan'ny Denizli Metropolitan Osman Zolan sy ny vadiny Berrin Zolan dia nitsidika ilay toerana fanaovana ski.
Nahafinaritra ny ankizy niaraka taminy
Ny ben'ny tanàna Osman Zolan sy ny vadiny Berrin Zolan, izay mpiara-miombon'antoka amin'ny fahafinaretana amin'ny tombotsoan'ny olom-pirenena, dia niarahaba tamina fampisehoana feno fitiavana. Olom-pirenena, izay nanondro fa faly be tokoa ry zareo amin'ny Centre Ski Denizli, nisaotra ny Ben'ny tanàna Zolan izay nitondra ilay fivoriambe tao an-tanàna. Ny ben'ny tanàna Osman Zolan dia niresaka tamin'ny olom-pirenena nandritra ny fotoana elaela, nanosika ireo sisan-taolan'ny ankizy mitsoloroka eo amin'ny faritry ny sisin-tany no sehatra sary mamolavola. Sarimihetsika maro no nalaina niaraka tamin'ny olom-pirenena nandritra ny fitsidihan'ny mpivady Zolan taty aoriana dia nitarika ilay fihaonana an-tampon'ny M3. Nihaona tamin'ireo ankizy tsy ampy taona ihany koa ny Ben'ny tanàna Zolan izay nanome fampianarana ski maimaimpoana avy amin'ny kaominin'i Denizli Metropolitan ary nirary fahombiazana izy ireo.
“Ny ranomasina eto an-dranomasina dia manana fitenenana amin'ny fizahan-tany artık fizahan-tany
Ny ben'ny tanàna Osman Zolan dia nilaza fa tena faly izy ireo amin'ny fahalianana lalina ao amin'ny Centre Ski Denizli ary tonga fotoana fohy io fotodrafitrasa io ary izy ireo dia iray amin'ireo toerana tiana indrindra amin'ny fanatanjahantena ririnina amin'ny vanim-potoana farany. Manantitrantitra fa ny kalitao kristaly ao amin'ny Centre Ski Denizli dia ao anatin'ny isan'ny fotodrafitrasa eto amin'izao tontolo izao, hoy ny ben'ny tanàna Zolan, "Amin'ny alàlan'ny zotra ski misy halavirana 13 km, izay manome lanja an'ireo mpivezivezy sy matihanina matihanina, ny tobin-trano misy anay izay afaka mitondra olona 2.500 4 isan'ora, ny rafitr'asa sosialy izay manome ireo zavatra ilain'ireo mpitsidika isan'andro dia tsy i Denizli ihany. manompo ny olom-pirenena izahay amin'ny lafiny iray. Izahay dia manana trano tsara misy ny rivotra, làlan-kaleha ary fitaovana rehetra. Mitombo isan'andro ny fahalianana amin'ny toeram-pisakafoanana ski lehibe indrindra an'ny Aegean. Manana fitenenana ny fizahan-tany amin'ny ririnina.
Eskişehir Konya fiaran-dalamby haingam-pitaterana dia mihazakazaka milaza ny fitateram-bahoaka (Video)
Mihazakazaka ny firaketana an-tseraseran'ny Antalya momba ny fitateram-bahoaka
Fiara an-tariby mihazakazaka mankany Rekora
Miantsena any amin'ny Ski Ski rehetra sy ny mpitsidika ny Ski Center Ergan
TCDD dia mihazakazaka haingana amin'ny Fanompoana amin'ny Transit amin'izao fotoana izao
Ny sehatry ny leasing dia mihazakazaka $ 10 miliara dolara amin'ny tetezana, lalambe ary metro!
Mianjera amin'ny arabe ny mpiasan'ny bus
Miantso ny metro manerana izao tontolo izao i Shina
Ny Centre Ski Center Karacadağ dia nandrava ny rakitsoratry ny mpitsidika
400 arivo mpitsidika ny Davraz Ski Resort
Ny Ivotoerana Ski M Thermal Mountain Thermal dia miandry mpitsidika
Ny skier amerikana Vonn dia mirotsaka an-tsoratra
Hisoratra anarana i İZBAN
Ski Resort Denizli
Fonenan-tsambo ao amin'ny seranam-piaramanidina ski Denizli
Ny mpitsidika ny Centre Ski Denizli